Akekho osakhulume nami kwiSAFA, kusho uMotsepe | isiZulu
Akekho osakhulume nami kwiSAFA, kusho uMotsepe
UMotsepe uthi uzomdedela uPitso uma iBafana imfuna
IZITHOMBE: ISundowns ikhethwe njengeqembu lonyaka yiCAF
UPitso ukhale wemuka nomklomelo weCAF
Cape Town – Umphathi weMamelodi Sundowns, uPatrice Motsepe, uthi inhlangano yezebhola kuleli, iSouth African Football Federation (SAFA) ibingakaze ixhumane nekilabhu yakhe ngenhloso yokuthi umqeqeshi waleli qembu, uPitso Mosimane, aqeqeshe iqembu lesizwe, iBafana Bafana.
IBafana Bafana idinga umqeqeshi omusha kulandela ukukhonjwa indlela kwalowo obengumqeqeshi wayo, uShakes Mashaba, ngemuva kokulahlwa amacala ‘okungaziphathi kahle, ukungahloniphi abaphathi kanye nokuphula umgomo wenhlangano wezokuxhumana’.
OLUNYE UDABA: UMotsepe uthi uzomdedela uPitso uma iBafana imfuna
Njengoba iSAFA isifake isicoco seCAF Champions League njengeminye yemibandela yokuthola umsebenzi wokuqeqesha iBafana, igama likaMosimane seliphinde lafakwa esigqokweni phezu kokuthi lo mqeqeshi osanda kukhethwa njengomqeqeshi wonyaka e-Afrika esanda kuvuselela inkontileka yakhe ngeminyaka emine namaBrazilians.
“Ngizosho, njengoPitso, akekho umuntu kuSAFA osakhulume nami,” uMotsepe utshele iTimes Live.
“Ngingathi akekho umuntu oseze kumina ngoPitso. Kodwa sengikushilo lokho (iSAFA) ayidingi ukuya (kumuntu).”
UMotsepe uqhube wathi usekujwayele ukulahlekelwa abantu ababalulekile kuyena.
Injabulo kuvulwa isikhungo sezemidlalo KwaDukuza
“Noma selingashaya uzamcolo wemvula, likhithike kodwa sesinekhaya elifudumele, lokuzilolonga.”
I-Arrows ithembisa ukuphepha kwabalandeli emdlalweni wayo neChiefs
IGolden Arrows isiqinisekise ukuphepha kwabalandeli ngokuthi iqinise ezokuphepha ngaphambi komdlalo wayo we-Absa Premiership neKaizer Chiefs ePrincess Magogo Stadium.
OKlebe babophe izisebenzi zenkampani yonogada kwesokwebiwa kuka-R30m 'kubanjwa inkunzi'
Cpt: 12-20°C Pta: 12-28°C
Jhb: 11-25°C Bloem: 8-26°C
Dbn: 20-26°C PE: 14-23°C
Cape Town - 12:26:30 PM HEAVY TRAFFIC towards Section Street Ezinye zasemigwaqeni